Torolàlana amin'ny fisafidianana kofehy canicross: manaova fanatanjahan-tena amin'ny alikao | Tontolo alika
Te hampihatra canicross amin'ny alikao ve ianao? Mba ho azo antoka ary na ny biby fiompinao ary mitondra ny zavatra ilainao ianao, dia zava-dehibe ny fananan'ny alikao canicross harness.
Fa inona no toy ny harika canicross? Misy marika tsara kokoa noho ny hafa ve? Inona no tombony atolotray raha oharina amin'ny fehin-kibo mahazatra? Aiza no hividy ny tsara indrindra? Raha manontany tena amin'ny tenanao ireo fanontaniana rehetra ireo ianao dia ity misy ny fampahalalana ilainao raha mahitsy ny fividiananao.
1 Ny harika canicross tsara indrindra
2 Inona no canicross
3 Manao ahoana ny harnesses ho an'ny canicross
4 Azoko atao ve ny mampiasa kofehy mahazatra amin'ny canicross?
5 Tombontsoa azo amin'ny harika canicross
6 Marika tsara indrindra ho an'ny canicross
6.1 Tsy mijanona
7 Aiza no hividianana bokotra canicross
Ny harika canicross tsara indrindra
LASALINE Harness ho an'ny ...
Hazakazaka Power Howl Avaratra...
Inona no canicross
Canicross dia fantatra ho toy ny hetsika fanatanjahantena izay tanterahina miaraka amin'ny alikanao. Izy io dia misy ny mihazakazaka miaraka amin'ny alika mifatotra amin'ny andilana. Ho an'izany, fehikibo manokana no ampiasaina, miaraka amin'ny tadiny sy carabiner, izay mampifandray amin'ny kofehin'ny alika. Izany no antony maha-zava-dehibe ny fampiasana hariben'akan-tavy satria izy ireo no mety indrindra amin'ity fanatanjahan-tena ity.
Ity hetsika ity dia natao tany Espana nandritra ny 15 taona mahery, na dia any amin'ny faritra hafa any Eropa aza dia manana fifaninanana mihitsy aza. Momba ny a fanatanjahan-tena izay mila fandanjalanjana sy fahatakarana tsara eo amin'ny olona sy ny alika, satria raha tsy misy dia mety ho lehibe ny vokatr'izy roa.
Manao ahoana ny harnesses ho an'ny canicross
Betsaka no mihevitra fa tsy tokony ho voafaritra manokana ny kofehy canicross fa miasa miaraka amin'izay novidiny. Ary na izany aza, mitovy amin'ny hoe manao sneakers 10 euro sy Sneakers manokana sy matihanina 90 euro ianao. Tena afaka manao fanatanjahan-tena miaraka amin'ny roa ianao, fa ny vokany amin'ny vatanao (manokana ny tongotrao) dia samy hafa be.
Toy izany koa amin'ny harika canicross. Ireo dia miavaka amin'ny maha-izy azy padding amin'ny faritra sasany izay hanaovan'ny biby ezaka ara-batana lehibe kokoa, toy ny sternum. Mazava kokoa izy ireo ary manandrana mahazo aina amin'ny biby izy ireo, mba tsy hanelingelina azy io rehefa mihazakazaka izy ary tsy mahatsapa ny fanerena hisintona ilay olona, ​​na koa mandratra tena.
Miankina amin'ny karazana canicross, ny karazana alika, ny habeny, sns. karazana iray na iray hafa no hatolotra bebe kokoa.
Rehefa mividy kofehy canicross dia tokony hodinihinao izao manaraka izao:
Aza mividy tery tery. Raha mpitsoa-ponenana ny alikanao dia misy modely mifantoka amin'ity karazana alika ity. Fa amin'ny ankapobeny dia avelanao hifoka izy, ary, ambonin'izany rehetra izany, ny harness dia tsy hanindry ny valan'ondry biby satria azonao atao ny mametraka azy anaty loza. Fika kely hahafantarana raha marina ilay izy dia ny fametahana rantsan-tànana roa manodidina ny andilana, tratra ary tendany.
Tokony hojerenao raha afaka ilay biby maka fofonaina lalina nefa tsy mahazo aina amin'izany.
Manana a fifandraisana avo. Ireo harnesses izay mifandray any aoriana dia mety kokoa amin'ny fikolokoloana fa tsy ny fiampitana. Mushing dia misarika sled.
Hamarino tsara fa tsy lava loatra ny fehin-kibo, satria tsy hampahazo aina azy io ary mety hampidi-doza kokoa ny fihetsiny ary mety handratra kokoa.
Azoko atao ve ny mampiasa kofehy mahazatra amin'ny canicross?
Raha jerena ireo voalaza etsy ambony ireo dia voavaly azo hatrany ity fanontaniana ity. Ny fehin-kibo ara-dalàna dia tsy mifantoka amin'ny fanaovana hetsika ara-batana, mainka fa ny biby misarika ny tompony amin'ny fomba sasany. Raha ny marina, raha manana alika ianao dia ho tsapanao fa, rehefa te hihazakazaka izy fa tsy ianao, ny tolona aterak'izany dia manimba ny biby.
Noho io antony io, na dia azo atao aza ny mampiasa harnesses mahazatra, tsy atolotra ho an'ny canicross. Ary, eto ambany, omenay anao ny antony (amin'ny alàlan'ny tombony) hampiasana ny fitaovana voalaza, izany hoe kofehy canicross.
Tombontsoa azo amin'ny harika canicross
Taorian'izay rehetra nolazainay taminao, dia tsy isalasalana fa ny fiadiana amin'ny kanika dia safidy tsara indrindra raha te hampihatra an'ity fanatanjahan-tena ity amin'ny alikao ianao. Saingy, raha tsy mazava aminao ny tombony an'ity karazana kojakoja ity dia lazainay aminao ny zava-dehibe indrindra amin'ny zavatra mampiavaka azy ireo.
Izy dia mahazo aina amin'ny harness. Amin'ny alàlan'ny fikojakojana paty, indrindra any amin'ireo faritra misy tsindry bebe kokoa, dia tratra fa tsy mijaly ilay biby ary miaraka amin'izay dia mahazo aina rehefa manao canicross.
Halaviro ny alika. Noho io padding io, ary koa satria ireo harness ireo dia natao ho an'ny canicross, dia hiaro ny alika amin'ny ratra ianao.
Mampiasà fitaovana iray mifantoka amin'ny fampihetseham-batana. Satria ity karazana fanatanjahantena ity dia mila kojakoja manokana kokoa mba tsy hisian'ny lozam-pifamoivoizana toy ny ratra, ny alika mandositra, may, sns.
Marika tsara indrindra ho an'ny canicross
Raha efa mieritreritra ny hanana harisota canicross ianao dia tokony ho fantatrao hoe iza no marika tsara indrindra, ireo izay atokisan'ny olona bebe kokoa ny kalitaony. Betsaka amin'izy ireo no tsy mora vidy, saingy mendrika izy ireo amin'ny fiarovana natolony, ary koa ny faharetan'ireo kojakoja. Te hahafantatra an'iza izahay? Ireto misy toy izao:
Handeha any Norvezy izahay hahalala ny niandohan'ity marika ity. Izy io dia manam-pahaizana manokana amin'ny fitaovana ho an'ny alika ary, raha jerena ny faritra misy azy, dia ho tsapantsika fa izy io no iray amin'ireo tsara indrindra ho an'ny alika mpamily, na anaty sled na canicross.
Momba ny volavolain'izy ireo dia manandrana azo ovaina, voaroaka ary zara raha tsapanao izany ny alika, mba ahazoana aina araka izay azo atao.
Speedog dia fivarotana an-tserasera manokana amin'ny vokatra, kojakoja ary famenoana, na ho an'ny olombelona na ho an'ny alika, hanaovana canicross, manangona, mandeha an-tongotra, mihaza, manao bisikileta, sns.
Ny vokatra amidiny dia kalitao tena avo lenta ary mifantoka amin'ireo matihanina, hikarakara tsara indrindra ny fahasalaman'ny biby. Izy ireo dia tsy vitan'ny harnesses, fa koa ny vokatra hafa toy ny baoty, famenon-tsakafo, sns.
Neewa dia marika italianina avo lenta. Manolotra vokatra izay ankehitriny no resahina rehefa mividy harness alika, tsy ho an'ny canicross ihany, fa amin'ny ankapobeny. Amin'ity tranga ity, mifantoka amin'ny kojakoja fanatanjahan-tena ho an'ny alika, miavaka izy ireo noho ny ergonomika ananany.
Izy ireo natao hifanaraka amin'ny taranaky ny alika, miaraka amina fehikibo fanitsiana sy fofonaina ary fitaovana hypoallergenic izay hisorohana ny fikororohana sy ny olana hafa amin'ny biby.
Decathlon no safidy "mora vidy" tsy maintsy hividiananao fitaovam-panatanjahan-tena ho an'ny alika. Raha ny marina, ao anatin'izany dia ho hitanao izay rehetra ilainao hampiharana canicross.
Na dia voafetra aza ny maodely, ny kalitaon'ireny, na dia tsy mifanaraka amin'ny fenitry ny marika teo aloha aza, dia azo ekena tokoa. Raha mbola tsy manao fanazaran-tena ianao dia hanompo anao tsara izy ireo.
Aiza no hividianana bokotra canicross
Raha mitady harness canicross ianao dia aza mijanona amin'ilay voalohany hitanao fa misy fivarotana marobe izay ahitanao modely mahaliana toy ny:
kiwiko: Izy io dia iray amin'ireo fivarotana mifantoka amin'ny kojakoja ho an'ny biby fiompy. Matetika izy ireo dia manana a katalaogy malalaka, na dia voafetra aza, miaraka amin'ny vokatra kalitao izay amidy sy tian'ny mpitia biby indrindra.
Amazon: Any Amazon dia manana tombony ianao amin'ny fividianana magazay lehibe miaraka amina orinasa marobe mandray anjara amin'ny fampisehoana ny katalaoginy. Io dia mamela anao hanana safidy bebe kokoa hisafidianana ny bokotra canicross anao. Karazan-karazany, habe, loko ary endrika maro kokoa. Izany no ho hitanao amin'ity fivarotana ity.
Matetika: Tendenimal, toa an'i Kiwoko na Zooplus, dia iray amin'ireo fantatra indrindra amin'ireo manana biby. Raha toa ka canicross harnesses dia misy manokana ary ny hafa izay azo anaovana izany fampiasana izany.
zooplus: Raha ny momba ny harilety canicross dia manana katalaogy voafetra ihany izy rehetra ireo izay amidiny dia manana kalitao avo lenta ary ny sasany amin'izy ireo misy naoty tsara.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Fitaovana alika » Fitaovana Canicross